इरानमा अमेरिकी प्रतिबन्ध, ‘नेपालमा असर’ | Rajmarga
एउटा प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र इरानमाथि अमेरिकाले पुन: प्रतिबन्धहरू लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा आउन सक्ने उतारचढावको असरबाट नेपाल समेत अलग रहन नसक्ने नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अवस्था हेरेर पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य समायोजन गर्नु पर्ने स्थितिसम्म आउन सक्छ।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार तेलको मूल्य अस्थिर हुन थालेको केही साता भइसकेको छ।
उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय प्रतिब्यारल ७० अमेरिकी डलर माथि रहेको कच्चा तेलको मूल्य यसबीच एक सातामै १० प्रतिशतसम्मले बढेको छ।
त्यसै पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर बनिराखेको नेपाली रूपैयाँकाबीच डलरमै खरिद हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने वृद्धिको थप मार पर्ने देखिन्छ।
कच्चा तेलको मूल्य १ डलर मात्र बढ्दा हामीलाई मासिक १८ करोडको भार पर्छ। नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग एक रूपैयाँ मात्र कमजोर हुँदा हामीलाई मासिक १४ करोड रूपैयाँ घाटा पर्छ।
सुशील भट्टराई, निमित्त प्रबन्ध निर्देशक , नेपाल आयल निगम
अहिलेसम्म मूल्य स्थिरिकरण कोषको अवस्था समेत बलियो रहेकाले जेनतेन मूल्य व्यवस्थापन भइरहेको नेपाल आयल निगमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराई बताउँछन् ।
कच्चा तेलको मूल्य धेरै नै बढेमा सरकारी कोषले थेग्न नसक्ने र नयाँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनले बताए।
“कच्चा तेलको मूल्य १ डलर मात्र बढ्दा हामीलाई मासिक १८ करोडको भार पर्छ। नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग एक रूपैयाँ मात्र कमजोर हुँदा हामीलाई मासिक १४ करोड रूपैयाँ घाटा पर्छ।”
भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने नेपालको खपत दर बर्सेि झण्डै एक चौथाई सम्मले बढिराखेको छ।
पेट्रोलियमका हकमा नेपालले गर्न सक्ने कुरा निकै कम भएकोले आफूसँग उपलब्ध स्रोतको विकल्पमै जोड दिनुपर्ने इन्धन मामिलाका जानकार प्राध्यापक अमृत नकर्मी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “नेपालले भारतबाट किन्ने इन्धन समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै मूल्यमा हुने हुँदा नेपाल मारमा त परिहाल्छ। सरकारले विभिन्न खाले अनुदान दिइराखेको छ। जस्तो, अहिले सरकारले एलपिजी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५०० रूपैयाँ अनुदान दिइराखेको छ। तर त्यसो नगर्दै बरू बिजुलीमा खाना पकाउँदा सस्तो पर्छ।”
पेट्रोलियमको मूल्य उतार चढाव हुँदा त्यसको असर सरकारी कोषसँगै बजारका चौतर्फी क्षेत्रमा हुने गरेको पाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कारण जतिबेला पनि नेपालमा पर्न सक्ने यस्ता सम्भावित असरबाट जोगिन उर्जाका स्थानीय स्रोतमै आफूलाई निर्भर बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड पाइन्छ। बीबीसी नेपाली सेवाबाट
Previous post: सुपर मोडल बन्न तौल घटाउँदा यस्तो दुर्दशा भयो यी युवतिको, अब अस्थिपञ्जरमात्र बाँकी
Next post: यति बढ्यो तौल आफैसँग लाग्थ्यो लाज, अचानक भइन् स्लीम, अब चिन्न पनि गाह्रो
नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा यसरी लाग्यो भूकम्पीय धक्का, कस्तो क्षति पुग्न सक्छ ?
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नबाट किन पछि हटिन् थाई राजकुमारी ? यस्तो छ कारण